I-10 YEEBHUTSI EZIFANELEKILEYO ZOKUNXIBA ZAMADODA NGO-2021 - UHLOBO
I-10 yeebhutsi ezifanelekileyo zokunxiba zamadoda ngo-2021
Bathi amadoda akanakuze abe nezihlangu ezininzi ngendlela efanayo nabasetyhini abanakuze babe nazo izinto zokuthambisa ezininzi. Ndimele ndivume. Nangona kukho iintlobo ezahlukeneyo zezihlangu umntu anokuba nazo, isibini esikhulu seebhutsi zokunxiba sinokuba nefuthe kakhulu.
Iibhutsi zokunxiba zibalulekile ekuguquleni ukunxiba okuqhelekileyo kwamadoda kwinqanaba elilandelayo. Kutheni unokubuza? Sinezizathu ezithathu zakho. Inye, inokuba sisicatshulwa sendoda. Isibini, igcina isitayile sendoda kwi-point ngaphandle kokuba kakhulu emehlweni.Kwaye okokugqibela, ngesona sizathu sincinci - izihlangu zokunxiba zingenza okanye zaphule umdla onokubakho wothando. Abasetyhini bathanda amadoda ngezihlangu ezilungileyo.
Ngenxa yeso sizathu sodwa sinikela kuwe ezona zihlangu zingcono kumadoda kwi-2021.
1. IWolverine 1000 Mile Boot
Ukuba woyikiswa ziibhutsi zokunxiba kwaye awuqinisekanga ukuba loluphi uphawu oza kulukhetha, olona khetho lwakho lungahle lube yiWolverine 1000 Mile Boot.Igama lale bhulukhwe yokunxiba lisuselwa kwimodeli ye-1940 yeWolverine eyenziwe ngokutsha-umtya othungwe kathathu ngasemva.
Isikhumba seprimiyamu esisetyenziselwe ezi bhutsi siqinisekisa ukuba i-1000 Mile Boot ihlala kwigama layo. Ezi ziibhotshi ezenziwe ngesandla ezixhasa abasebenzi baseMelika kunye nabavelisi.
Ukuqhubela phambili kwi-anatomy ye-boot, ephezulu yenziwe ngofele kunye nezinto ze-suede. I-outsole yesikhumba esidala enesithende sobunikazi. Ukugcina uyilo oluhlala luhleli, kuye kwongezwa imitya ejikelezileyo eluhlaza. Ezi zihlangu zinokuphinda zifakwe kwisanti okanye zilungiswe kubulelwe ukwakhiwa kweGoodyear Welt. Iinyawo zakho ziya kuziva i amava eprimiyamu enkosi kwisirinji yesine egudileyo yesokisi yokufaka isokisi.
Ukuba ufuna into engaphantsi kobunzima ngaphandle kokubeka esichengeni intuthuzelo, emva koko iWolverine 1000 Mile Boot yeyona nto ukubheja kwakho. Ngaphandle koko, ibizwa ngegamaIWolverine. Uluhlu.
2. RM Williams Comfort Ingcibi
inamba isono somsindo
Ngokungafaniyo nesibini sokuqala esisazisileyo, iibhanki ezilandelayo zebhotile ngakumbi kwintuthuzelo kunayo nayiphi na enye into. Eyenziwe ngesandla, i-RM Williams Comfort Craftsman Boots kukhetho lwethu lweprimiyamu.
Unganxiba esi sibini xa usiya emsebenzini okanye ngamanye amaxesha. Inendawo yokuthunga engatyibilikiyo ethungiweyo ekuvumela ukuba uhambe kwiindawo ezingaqhelekanga ngokulula. Intuthuzelo yangaphakathi ebhuthini yangaphakathi iyongeza kwinduduzo kwezi zonxibo.
Yenziwe ngofele lonyaka, unokuqiniseka ukuba umgangatho, isimilo, ukuthamba, kunye nokuqina kwemathiriyeli kuhlolwe kakuhle ukufezekisa imigangatho ephezulu yohlobo.
I-RM Williams sisiqhelo sase-Aussie, esi sibini siza nesithende esithe tyaba, uzwane wesikwele kunye nomtya wesithende. Ukukunceda ufumane okona kulungileyo, ezi zihlangu zinamacala aselastiki, zilungele amadoda aneenyawo ezibanzi.
3. I-Clark Desert Boot
Izono ezi-7 ezibulalayo ze-tattoo
Ngelixa uninzi lweebhutsi zokunxiba zifumaneka kwimibala esisiseko emnyama nemdaka, iClarks Desert Boot ibonelela ngeminye imibala engathathi hlangothi kunye nokudityaniswa onokukhetha kuko. Imibala eyaziwayo evela kwibrendi ibandakanya i-beeswax, isanti, umhlophe, umnquma omnyama, ngwevu, kunye nomhlwa. Ukuhambisa i-anatomy yale buti, inenxalenye ephezulu eyenziwe ngesikhumba kunye ne-suede edweliswe ngesikhumba segusha kunye ne-crepe soles.
Ayinayo i-insole esusekayo, oko kuthetha ukuba kuya kufuneka ukhuphe esi sibini rhoqo ukukhusela iinyawo ezinukayo kunye nesihlangu esinukayo. Ukuba ungumtshatsheli weentambo ze-lace kunye ne-eyelet trim kodwa ukhetha kuphela ezimbalwa zazo, esi sibini senzelwe wena.
Ezi zihlangu zilula kwaye zintle zinikezela ngexabiso elifanelekileyo phakathi kwezinye izibini kwaye ziyafumaneka kubungakanani base-US ukuya kwi-7 ukuya kwi-13. ukuqalelisa.
4. UGqr Martens 1460 Smooth Leather Leace Up Boots
Ngokufanayo nezibini zangaphambili, uGqr. Unokufumana umbala okhangayo onje ngatyheli, isatchel ebomvu, ipepermint eluhlaza, kunye neorenji, ukubala nje ezimbalwa.
I-1460 boot kulula ukuyibona ngokutyikitya kwayo amehlo asibhozo, izinto zesikhumba ezigudileyo kunye nokuthungwa okumthubi ematheni. Ioyile kunye neoyile enganyangekiyo yomoya oxineneyo ine-abrasion elungileyo kunye nokumelana nesiliphu esibonelela ngokuhamba kakuhle kwiindawo ezinekhephu okanye ezimtyibilizi. Isikhumba esigudileyo esigudileyo sinzima ukuqala, kodwa ngokuthe ngcembe siyathamba ngokusetyenziswa okungagungqiyo kwaye sinokucocwa ngokokuthanda komthengi.
Kukhuseleko olungcono kunye nolondolozo, inkampani icebisa ukuba uthenge i-Wonder Balsam yabo, eyenzelwe ngokukodwa ezi bhotile zokunxiba. Unokufumana u-Doc Martens kuluhlu olukhulu kakhulu lobungakanani base-US ukusuka kwi-7 kuye kwi-15.
5. UOliver Cabell Wilson Brown
Olona phawu lubalaseleyo lukaOliver Cabell Wilson Brown inokuba yimisonto, eyenziwe ngesikhumba se-Italiya. Ngaphandle, ukuthungwa kwayo kukaBlake kuvumela ukuphela kwento ukuba itshintshwe xa kufuneka njalo ngelixa isikhumba esisikiweyo semifuno esenza indawo ephezulu, unyawo kunye ne-midsole yenziwe ngobuchule.
Ezi zihlangu ziyamelana namanzi, zinee-anti-slip zerabha ezingaphandle. Zenziwe eNgilani, ezi zihlangu zokunxiba zinikezela nge-insole ebunjiweyo yokususa intuthuzelo, kodwa unokukhetha ukuyibuyisela endaweni ngamathambo, kuxhomekeke kukhetho lwakho.
Amacwecwe amathandathu enziwe ngobhedu kwinkangeleko yeediliya. Ibhuthi nganye ikwanamagwegwe esantya. I-shank yintsimbi eyenziwe ngesiko evela eJamani kwaye ukugqitywa kokugqitywa kwenziwa ngesandla e-Albacete, eSpain.
Ezinxulumene: Iibhutsi ezili-9 eziphambili ze-Chelsea zamadoda ngo-2021
6. Iiprojekthi eziqhelekileyo Iibhutsi ze-Ankle-Length
malini ukucebisa umculi we tattoo
Iiprojekthi eziqhelekileyo Iibhutsi ze-Ankle-Length ziimfuno zexesha lasebusika. Babonisa indlela yenkampani yokucoceka ecocekileyo ngaphandle kokuphazamisa ubuhle ngokubanzi beebhutsi. Le ndlela iyafana ne-RM Williams esele ikhankanyiwe ngaphambili kodwa inezinto zayo ezizodwa ezinje ngetoni yegolide yokubhala uphawu.
Iiprojekthi eziqhelekileyo Iibhutsi ze-Ankle-Length Boots zenziwa e-Itali kwaye ziyafumaneka kubungakanani base-US ukusuka kwi-6 ukuya kwi-12.
Izinto zerabha ezingama-100% zangaphantsi zinegalelo kubunqunu beebhutsi, ezinokuthi ezinye zikhethe ukonyusa ukuphakama.
7. Iibhutsi zeLace eziPhezulu eziBomvu
Ukuba ufuna iibhutsi ezinxibe ngokungqindilili kuya kufuneka ujonge i-Red Wing Lace-Up Boots nge-100% yelinen yesikhumba, ithole elingaphandle lesikhumba, kunye nerabha yodwa. Ngokungafaniyo nezinye iibhutsi ezikuluhlu, ezi zihlangu zokunxiba zithengwa ikakhulu emsebenzini kunye neenjongo ezinxulumene nokhuseleko. Usenokukufumanisa kunzima ukukhangela oku kwesibini seebhutsi zokunxiba kwi-intanethi, kodwa konke kufanelekile. Inkampani ye-Red Wing ikholelwa ekubeni umntu angafumana isihlangu esifanelekileyo kwiivenkile ezithengisa endaweni yokuthembela kubungakanani bezikhokelo ezikwi-intanethi. Oko kwathiwa, sifumene umthengisi omkhulu apho ungabamba khona izihlangu.
Iphiko elibomvu landise ukhetho lwabo kwaye bahlela iimveliso zalo ngokusekwe kuhlobo, isitayile, kunye nokukhethwa kwesikhumba. Unokukhetha nokuba yi-8-intshi okanye i-intshi ezi-6 ubude ukuphakama kuqala. Emva koko unokunciphisa ukhetho lwakho ngokusekwe kwizitayile ezichazwe ngokufanelekileyo emva kwemisebenzi yokufuna umsebenzi, njengeLogger, Blacksmith, kunye neRanger ranger.
8. UPaul Smith Oscar Boots
Ezi zihlangu zokunxiba zinohlobo olukhawulezayo lokwahluka kwezinye esibonisile ukuza kuthi ga ngoku. I-Paul Smith Oscar Boot, eyilelwe ngeenzwane ezimile okweamangile, ine-zip ukuvalwa kwisithende kunye ne-gunmetal tone-hardware. Umphezulu wenziwe ngesikhumba senkomo ngombala omnye omnyama, ngelixa isona sodwa senziwe ngerabha eyanyatheliswayo. Ezi zibhotshi zikaOscar zenziwe e-Itali kwaye ziyafumaneka ngobungakanani base-US ukuya kwi-11.
Inkampani ikwabonelela ngezixhobo zokugcina izihlangu kunye neekiti ezijolise ekugcineni iinyawo neebhutsi zakho zikwimeko entle. Unokubafumana kwakhona kwi-tan suede, kuxhomekeke kwiphalethi yakho yekhabethe. Kodwa ezi bhotshi zokunxiba ezimnyama ziguquguquka kakhulu kwaye kulula ukuzenza. Iwebhusayithi kaPaul Smith icebisa ukuba ubanxibe ngeebhlukhwe ezilungiselelwe kunye neejezi ngenkangeleko yeklasikhi ngokulinganayo.
9. UThom Browne Wingtip Brogue Grey-Leather Boots
Esinye isibini esenziwe ngombala omnye wombala nguThom Browne Wingtip Brogue Grained-Leather Boots. Ezi zihlangu zokunxiba zidibanisa iinkcukacha zezihlangu zakudala kunye nesilhouette yanamhlanje. Yenziwe e-Itali, esi sibini siqhayisa phezulu kunye nomgangatho ocacileyo wokuchaphazela umnwe welifa lemveli. Unokuthi ezi zihlangu zokunxiba zenzelwe ukwahlula uphawu kuhlobo lwabakhuphisana nabo. NjengoGqr.Martens, itom ka-Thom Browne ye-tricolor grosgrain ibonakaliswe zezi zihlangu.
Ukuba ungumthandi wokuthenga izinto zohlobo olufanayo okanye ileyibhile yokuhambelana kunye nefashoni yangaphambi kwexesha, ezi zihlangu zokunxiba ziya kukufanela. UThom Browne waziwa ngokuba ngumceli mngeni kwimpahla yokunxiba efanayo, isimbo, kunye nefashoni, ngezi zihlangu enye intsiba kwikepusi yohlobo lophawu.
Enye yeebhutsi ezimbini zokunxiba kolu luhlu zenziwe kusetyenziswa i-suede, i-Wyatt yase-Saint Laurent ye-30 Jodhpur Boot nayo inohlobo olwahlukileyo lokuqina. Ezi zihlangu zide zamaqatha zinemitya yeqatha kunye nokuqina kwecala, okwenza ukuba zikhetheke ngokukodwa ngenkangeleko. I-Saint Laurent inesikhokelo sayo sobungakanani, kwaye ezi zihlangu zokunxiba ziyafumaneka kubungakanani beelebheli ezingama-39 ukuya kuma-48.
Umbala we-cigar brown lining wenziwe nge-100% yesikhumba, ngelixa icandelo langaphandle lisebenzisa i-100% ye-suede material. Iimveliso ezisithoba ezidlulileyo zonke zineentambo zerabha, ngelixa le inesikhumba sodwa endaweni yoko.
Iibhola zerabha zibhetyebhetye ngakumbi kunesikhumba, kodwa le yokugqibela inako ukubumba iinyawo zakho ngendlela yendalo ebhedini. Le yeyona nto ibiza kakhulu kuzo zonke izihlangu zokunxiba esele sizikhankanyile, kodwa unokuqiniseka ukuba ufumana imveliso ephezulu kwenye yeemveliso eziphambili zefashoni.
Ezinxulumene: Ama-23 aphezulu e-American enza iibhutsi zomsebenzi emadodeni
izimvo zangasese ezingwevu nengwevu
Yintoni ibhutsi yengubo?
Iibhutsi zokunxiba zimfutshane, zihlala zibude bamaqatha, izihlangu zesikhumba ezinxitywa ngamadoda. Isetyenziswe njengenye indlela yokunxiba izihlangu ezisemthethweni, amadoda anxiba iibhutsi zokunxiba kwimozulu embi okanye iindawo ezi-rougher ezisadinga ukunxiba ngokusesikweni.
Zeziphi ezona mpahla zintle zokunxiba?
Kukho uninzi lweempawu ezingaphezulu kweenotshi onokukhetha kuzo, kunye ne-10 yezona zikhankanywe ngokubalaseleyo kweli nqaku. Ekupheleni kosuku, malunga nokuba yeyiphi ibhuthi oziva ukhululekile ukuyinxiba.
Yeyiphi impahla ehamba kakuhle ngesihlangu sokunxiba?
Iibhutsi zokunxiba zinokufakwa isitayile kunye neziqwenga zakho ozithandayo. Unokwenza i-vibe entle kodwa ekhululekile xa unxiba iibhutsi ezimnyama ngeblazer kunye neblukhwe yokunxiba. Ukuba awuyiva i-vibe enxibayo kodwa usafuna ukujonga kwaye uzive uzithembile; ihempe elula yentamo, yengwevu yabasebenzi kunye nezinye ii-chinos ezimnyama zinokujongeka zingabalulekanga kwaye zilungele ishishini ukuba uyanxiba.
Umnyama kunye nomvambo wesithuba esingwevu
iinwele ezinde ezisongiweyo phezulu kufutshane emacaleni
ihempe emnyama eneejean ezimnyama
Izimvo zemikhono emnyama kunye nengwevu ye tattoo
ndingayifaka nini i-sunscreen kwi tattoo yam
I-lotus intyatyambo yesifuba esifubeni